IMF Oo Soo Dhaweysay Qorshaha Dib U Habeynta Dhaqaalaha Dowladda Soomaaliya – HCTV
Ahmed Cige 0	October 20, 2019 12:02 pm
Muqdisho, (HCTV) – Soomaaliya ayaa dadaal ballaaran ugu jirta sidii looga dhaafi lahaa ama looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay, waxaana maalmihii ugu danbeeyay magaalada Washington ee dalka Mareykanka ka soconaya kulamo arintaa ku saabsan.
Agaasimaha maamulka IMF, Kristalina Georgieva ayaa ka hadashay kulan magaalada Washongton maalintii shalay ay kula yeelatay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo u horkacyo Ra’iisal Wasaare Xassan Cali Kheyre, waxeyn sheegtay in kulankaasi uu ahaa mid miro dhal ah.
”Waxaan kulan mira dhal ah shalay kula qaatay xarunta dhexe ee IMF ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo aan ugu hambalyeeyay dhaqan galinta xooggan ee joogtada ah ee uu ku sameeyay qorshaha dib u-habeynta dhaqaalaha iyadoo ay jireen caqabado badan”ayay tidhi Kristalina.
Warka ka soo baxay hay’adda ayaa lagu sheegay intii uu socday kulanka in Ra’iisul Wasaaruhu uu ku celiyay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay dib-u-habeynta iy,adaoo la raacayo barnaamijka SMP ee socda, waxa uuna sidoo kale adkeeyay dhammeystirka qorshaha qaranka sagaalaad ee dhawaan golaha wasiirradu ansixiyeen.
Dhameystirka qorshaha horumarinta qaranka iyo dib-u-habeyntu waxaa ay qayb ka yihiin shuruudaha hindisaha wadamada saboolka ah ee aadka u deymeysan (HIPC).